Namuhla, i-Rosaceae umndeni isakazeke emikhawulweni yonke yakwa- Europe, South Asia naseNyakatho Melika. Siqukethe izizukulwane ezahlukene ikhulu namashumi ezingaphezu kuka eziyizinkulungwane ezintathu. Shades of izimbali engavamile lezi zitshalo avame ezimhlophe, futhi kukhona obomvu, ophuzi, osawolintshi, pink. A qiniso eliyimpicabadala - naphezu kweqiniso lokuthi Rosaceae mkhaya eziningi ezihlukahlukene abamele, kuhlanganise omunye kungekho izimbali blue umbala.
Naphezu kweqiniso lokuthi ezinye amaqembu ngezinye izikhathi Rosaceae oluthathwa njengomkhaya, sihlukanisiwe, ososayensi bathi, nokho, kungenziwa zonke izitshalo ezifana kuchazwe njengomkhaya, njengoba iningi lamalungu alo bavela kukhokho oyedwa. Ukukhumbula biology, sithola ukuthi ekilasini dicotyledons ihlanganisa Rosaceae umndeni. I inflorescence alesi sigaba itholakala ukuhluka eziningi ezahlukene. Ziyakwazi ngokuvamile unisexual futhi ube perianth emihlanu membered. Amaqabunga alula nanzima, futhi baye basungula stipules.
Ukwahlukanisa Rosaceae umndeni yakhiwa subfamilies ezinkulu ezine
Kuzo zonke subfamilies ekhona zibhekwa spireynye bakudala kakhulu. Njengoba ungalindela, le nezihlahla ongaphakeme, ngezinye izikhathi ngisho izihlahla, kodwa ngezinye izikhathi kunezindlela amakhambi zisetshenziswa. ukunambitheka yabo egqamile edonsela ngesikhathi sokuqhakaza Kunezinhlobo ezihlukahlukene zezinambuzane impova. I spireynyh subfamily ngokuvamile sisetshenziswa engadini. Ngo umkhakha, basuke kabanzi ukwenziwa amakhemikhali yasendlini.
Rosaceae umndeni ihlanganisa subfamily ngobukhulu - pink. Amalungu alesi subfamily zingatholakala ensimini ka wonke sezulu esihlukahlukene zomhlaba, kusukela yenkabazwe eziqhingini-Arctic Ocean. Izihlahla kubo bazimisele ngokuphelele ezikhishiwe. Kwezolimo, zinhlobo njalo ezifana ama-raspberry, amajikijolo, ama-strawberry. Abaningi kakhulu amakhambi ethulwa Ezikhula iminyaka eminingi rhizomatous.
Laba bameleli be-ezivamile womndeni apula izinhlobo ezahlukene amagonandoda, hawthorn, apula kanye Rowan. Basuke izimpawu obukhulu izithelo esinamanzi. Izitshalo iyefana subfamily apula sprieynymi ekukhetheni izindawo. Futhi labo nabanye kwenzeka kaningi, ngokuvamile emithambekeni ye izintaba. White futhi izimbali pink yalezi izitshalo kabanzi emkhakheni wezokwelapha. izithelo Irgi, hawthorn kanye Rowan abasakwazi ezidliwayo ngoba abantu, kodwa ngokuvamile zidla izilwane musa yokucashisa esikhathini ekwindla-ubusika.
Abamele subfamily iplamu zivame ukukhula zibe e-Asia futhi eYurophu, nakuba kungatholakala ngisho e-Andes. Kulesi subfamily Avame ukutholakala izihlahla, kodwa namanje kubuswa lezihlahla, futhi izimbali zazo ngokuvamile eqoqwe ngendlela Bun. Phakathi kwabo kukhona kokubili abathandi entabeni futhi kushisa bhé, futhi labo abakhetha amahlathi mossy. Izihlahla omndeni ka iplamu, ngesikhathi sokuqhakaza ihlaba umkhosi ukunambitheka kakhulu. Uyakwazi izinambuzane hhayi kuphela, kodwa futhi abantu ngeke abashiye nandaba.
Naphezu kweqiniso lokuthi namuhla cishe emhlabeni wonke ukusakaza omkhaya Rosaceae, abameleli bakhe, njengoba umthetho, kuvamile ngaphezulu isimo sezulu sifudumele nakwezifudumele. Basuke kabanzi emikhakheni ehlukahlukene deyatelnosti.Imenno womuntu Lezi zihlanganisa zonke izinhlobo izithelo izitshalo: iplamu, cherry, apula, Quince, eliphakathi kwe, peach, cherry nabanye abaningi. berry izitshalo eziningi futhi kukhona kulo mndeni, e strawberry ethile, ama-raspberry, strawberry. Ngaphezu kwalokho, umndeni Rosaceae liyaziwa izimbali zalo ezinhle ezinephunga elimnandi, ngakho nabameleli bayo zibizwa kabanzi njengendlela imihlobiso engadini.
Stem Hollyhock rose: ezikhula imbewu
Emnyama: njengoba ekhula ngokwemvelo futhi ekhaya
Uhlobo elikhulu futhi giant: nabalingisi kafushane mayelana esiqintini ifilimu
Kwenzekani ku lomngcwabo nendikimba? amaqiniso ezithakazelisayo
Izwe elizweni. Ukuthungatha izithombe ngezandla zabo (isithombe)